Ividiyo: Izindaba Zezindaba | Martech Zone
Izolo kusihlwa ngiye kwi IFranklin Film Festival, umkhosi waminyaka yonke wokugubha amavidiyo aqoshwa, aqoshwa akhiqizwa ngabafundi baseFranklin Indiana High School. Amavidiyo amafushane wonke ayakhuthaza futhi owinile wabizwa ngomunye Izindaba Zezindaba ngu-Austin Schmidt noSam Meyer.
Ifilimu igxila kumjikelezo wezindaba futhi iqhathanisa ithelevishini yasendaweni, iphephandaba kanye nomsakazo nokuthi kufanele bazijwayeze kanjani isidingo esisheshayo sokuqukethwe ngewebhu nakwezokuxhumana. Ngenkathi kunesidingo esikhulu sokuqukethwe nezethameli kwabelwana ngazo kuma-mediums, le ndaba, kuyindida, isibonelo esihle salokho okubalulekile nokhiye kubuntatheli obuhle. Amabhulogi kanye nemithombo yezokuxhumana izindlela eziyinhloko zokuxhuma nokushicilela ngokushesha, kepha okuqukethwe akuhlolisiswanga ngokuphelele futhi kubhalwe phansi njengendaba ebhalwe yintatheli enhle.
Ulwazi oluhle luzohlale lusetshenziswa kahle. Izintatheli akufanele zincintisane nomjikelezo wezindaba we-24/7, kufanele ngabe zinikeza ukujula okudingekayo ukuze siqonde ngokugcwele isihloko esinikeziwe. Ngicabanga ukuthi yilokho okulahlekile empini yezinhlamvu zamehlo futhi yikho kanye ukuthi kungani ukufunda nokubuka kuzulazula emithonjeni yezindaba yendabuko. Akukona ukuthi izindaba zingcono ku-inthanethi, ukuthi izindaba azibikwa kahle. Ngiyethemba ukuthi u-Austin noSam bakufunde lokhu ngenkathi bebhala futhi bathuthukisa eyabo indaba enhle.
Futhi ngithemba ukuthi yilokho abathengisi abafunda ngakho ukondla isilo kanjalo. Ukubhala okuqukethwe ngenhloso yokubhala okuqukethwe kufiphaza ukugxila kwezithameli zakho futhi akubaniki imininingwane ephelele abayifunayo. Bhala kahle, yabelana kaningi, futhi wenze okuqukethwe okumangazayo.
Tags: u-austin schmidtungawettrickumkhosi wefranklin filmizindaba zabezindabasam meyer